Etu esi eme akwa isi maka akwa | Bezzia
Nke Torres | 14/10/2021 10:00 | Mee ya n'onwe gị
Iji akwa chọọ ụlọ mma bụ ụzọ kachasị mma iji weta ọkụ na ọkụ ụlọ n'ime ụlọ niile. Ọbụna ọ na -enye gị ohere enwere ike rụzigharị mma ahụ n'ụzọ dị mfe, na obere mgbanwe ole na ole na ntinye ego akụ na ụba kacha nta. Maka na ịkwesighi ịbụ onye ọkwọ ụgbọ mmiri ọkachamara, ma ọ bụ nwee ngwaọrụ kachasị mma nke ị ga -eji na -adụ akwa, ebe ọ bụ na taa enwere ụzọ ọzọ bara uru iji mepụta akwa na ụdị niile.
N'okwu a, anyị ga -emepụta akwa isi maka akwa, ihe eji achọ mma nke ga -abakwa uru. Mgbe ịchọrọ iwepụta oge gụọ akwụkwọ tupu ị lakpuo ụra ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ị dinara na -ekiri TV, ọ gaghị adị gị mkpa inwekwu akwa. Ebe ọ bụ na isi oche nke gị ga -enyere gị aka dina ala n'enweghi ịgagharị na -etinye nkwushin ma emechaa. Ihe dị irè, eji achọ mma ma dị mfe ịme abụọ n'ime otu.
1 Otu esi eme akwa isi
1.1 Ihe ndị dị mkpa
1.2 Nzọụkwụ iji mepụta akwa isi ejiri aka mee
Otu esi eme akwa isi
Ụzọ kachasị mfe iji mepụta akwa isi bụ inwe igwe ịkwa akwa. Ọ bụ akwa dị mfe nke ị nwere ike ime ọbụlagodi na ị bụghị ọkachamara ọmarịcha akwa mmiri. Ọzọkwa ị nwere ike nweta igwe ịkwa akwa, ngwa ọrụ dị ọnụ ala nke ị nwere ike iji obere nhazi wee mepụta ihe dị mfe dịka nke a.
N'ikpeazụ, ị nwere nhọrọ mgbe niile iji aka gị na -akwa. Agbanyeghị na nsonaazụ agaghị adị ka nke enwetara na ịkwa akwa igwe, Ọ ka bụ ọrụ aka na ọdịiche ọ bụla ga -abụ ihe na -eme ya ọpụrụiche. Site n'itinye akwa dị oke mkpa na nnukwu ndidi, ị nwere ike mepụta isi ihe eji eme akwa gị ahaziri nke ọma.
Nke mbụ, anyị ga -atụrịrị mgbidi ahụ iji tụọ ihe ndị dị mkpa. Na mkpokọta, okpokoro isi kwesịrị ịha ka ihe ndina ma ọ bụ sentimita ole na ole karịa, n'agbanyeghị na ị bụ ihe ejiri aka mee, ị nwere ike họrọ nha ị chọrọ. Maka otu akwa, ihe kacha kwesị ekwesị bụ ịme otu kwushin dị ka isi. A bịa na nnukwu akwa, anyị nwere ike họrọ n'etiti ịme otu ma ọ bụ abụọ.
Maka akwa akwa dị sentimita 90 ndị a bụ ihe anyị ga -achọ.
Akwa akwa akwa, na ahụ na iguzogide na -adịte aka. Ogo ikpeazụ ga -abụ otu mita n'obosara na sentimita 1 n'ịdị elu. Yabụ na anyị ga -achọ iberibe akwa abụọ 80 sentimita n'obosara site na otu mita n'ịdị elu, nha ndị a na -eburu n'uche ohere mmachi.
Ncha akwa akwa ma ọ bụ akara.
Agịga na eri ma ọ bụ igweoduakwa.
Mkpanaka ákwà mgbochi nke ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mkpa na ụfọdụ nkwado iji jidesie osisi ike na mgbidi.
Eriri ndochi maka ihe ndina.
4 botones ukwu.
Nzọụkwụ iji mepụta akwa isi ejiri aka mee
Nke mbụ, anyị ga -atụle nha na akwa. Anyị na -ese rektangulu nwere nha nha yana nke ọzọ nwere ihe dị ka sentimita ise n'obosara maka oghere. Nke a ga -enyere anyị aka mgbe anyị na -akwa akwa ma ọ bụrụ na anyị amachaghị nke ọma n'okwu ndị a.
Anyị na -ebipụ akwa site oke mpụta.
Tupu isonye na iberibe anyị ga -aga mechie ọnụ nke akwa na oke ikukuN'ụzọ dị otú a, anyị ga -egbochi ha ịkpa oke.
Ugbu a, anyị ga -emepụta okpu n'otu akụkụ nke obosara, na -ahụ na ha mara ezigbo mma.
Anyị na -aga ịkwa akwa akwa, maka nke a anyị na -eche ha ihu ma na -adụ n'akụkụ atọ fọdụrụnụ. Ịhapụ akụkụ ebe anyị mere ọnụ ya na -ejikọghị.
Anyị na -atụgharị ya ma gafere efere ahụ site na seams ka ha dị ezigbo ụtọ.
Ugbu a, anyị ga -emepụta eriri loops, na nke a anyị ga -achọ 4 maka nha nke otu mita n'obosara. Ihe nha ga -adị sentimita 20 n'ogologo na 8 obosara. Anyị na -ahapụ mmachi akpa, anyị na -ebipụ iberibe akwa. Anyị na -atụgharị ibe ahụ, gafee efere wee dụkọta akụkụ furu efu.
Imecha eriri loops ka anyị mee olulu mmiri, ị nwere ike iji igwe ịkwa akwa gị ma ọ bụ jiri aka mee ha.
Anyị na -etinye loops na akwa Iji mara ebe ịpị bọtịnụ ahụ, jide n'aka na ha niile bụ otu anya.
Ugbu a anyị na -agbanye bọtịnụ n'ime envelopu ákwà.
Anyị na -adụ akwa loops n'otu akụkụ ya n'azụ azụ isi ụlọ.
Anyị na -ejedebe na bọtịnụ na anyị na -ejuputa eriri isi maka ihe ndina.
Anyị enwelarị isi ihe eji eme akwa, anyị ga -etinyerịrị ihe nkwado maka mkpanaka ákwà mgbochi na mgbidi. Tinye mmanya ahụ site na loops dị na isi wee tinye ya n'ihe ndina gị. N'ehihie nke ịkwa akwa, ị ga -enwe isi ọhụrụ gị dị njikere inye ikuku dị iche n'ime ụlọ ihi ụra gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Mee ya n'onwe gị » Otu esi eme akwa isi maka akwa
Kedu ihe bụ akụkụ pelvic na otu esi ewusi ya ike